Shao Lin Xiang Mo (2020) – Gold Channel Movies
တရုတ်ကား အသစ်​လေးတစ်ကားကို တင်ဆက်​ပေးပါရ​စေ။ ဇာတ်ကားနာမည်က​တော့ Shao Lin Xiang Mo တဲ့။ ဇာတ်ကားရဲ့ အ​သေးစိတ်ကိုရှာလို မ​တွေ့​တော့ Rating ဘာညာ​တော့ ​ရေးပြလို့ အဆင်​မ​ပြေ​တော့ပါ။ အဲ့လိုဆို​တော့ ဇာတ်လမ်း​လေးအ​ကြောင်း​ပြောပြမယ်။
​ရှောင်လင်ဘုန်းကြီး​လေး တစ်ပါးရှိတယ်။ သူ့ဆီမှာ ငယ်ငယ်ကတည်းက သူ့ကို ကြိတ်​ကြွေ​နေတဲ့ ​က​လေးမ​လေး​တစ်​ယောက်ရှိတယ်။ နာမည်က​တော့ ဆုဆုတဲ့။ ဆုဆု​လေးက ငယ်စဥ်ကတည်းက ​ရှောင်လင်ဘုန်းကြီး​​​​လေး ဟွိန့်ဟိုင်ကို အ​သေရရ အရှင်ရရပဲ။ ​အဲ့ဒီက​နေ ​အရွယ်​ရောက်လာတဲ့အထိ ဆုဆု​လေးက ​ဟွိန့်ဟိုင်ကိုဆို အရမ်းကြိုက်။ ဟွိန့်ဟိုင်က​တော့ ဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့လို​​တွေ လက်မခံဘူး​​ပေါ့။ အဲ့ဒီ​နောက်မှာ​တော့ တရုတ်ကားထုံးစံအတိုင်း မြတ်စွာဘုရားကို ဆန့်ကျင်တဲ့ မိစ္ဆာတစ်​ယောက်ရဲ့ ရန်​ကြောင့် ပြည်သူ​တွေ ​သေ​ကြေရပါ​တော့တယ်။ အဲ့ဒီ မိစ္ဆာကို​ နှိမ်နင်းဖို့တာဝန်က ဟွိန့်ဟိုင်ပုခုံး​ပေါ်ကို အလိုလိုကျလာတယ်ဆိုပါ​တော့။
ဒါက​တော့ ဗဟုသုတအ​နေနဲ့ပါ။ ကျွန်​တော်လဲ ဒီဇာတ်ကားကြည့်ဖြစ်မှ ရှာဖတ်ရင်းသိတာပါ။ ​အစက ဆုဆုကို​မြေမြိုမဲ့ ​ကောင်မ​လေးဆိုပြီး​တွေး​နေမိတာ။ ပြီးမှသိလိုက်ရတာက ​ရှောင်လင်ကိုယ်​တော်​တွေက လက်ထပ်လို့ရတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ​ဘုရား​ကျောင်းမှာ​တော့ အဲ့လိုကိစ္စ​တွေကို တားမြစ်ထားတယ်ဆို​​ပေမဲ့ ဘုရား​ကျောင်းကို စွန့်ခွာလိုက်ရင်​တော့ ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကမညှိုးနွမ်းသွားပဲနဲ့ လက်ထပ်လို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါ​လေးက​တော့ ဆုဆုကို ​​ပြော​နေကြမှာစိုးလို့ ရှာဖတ်ပြီး​ရေး​ပေးထားတာပါ။ ဇာတ်​အိမ်က​တော့ အခိုင်ကြီးမဟုတ်​ပေမဲ့ တရုတ်ကားတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဆုဆု​လေးကို ကြည့်ရတာ​နဲ့တင်တန်ပါတယ်။
Size – 800MB / 300MB
Download UserDrive SD ?????? 300 mb
Download UserDrive HD ?????? 800 mb
MinhtetApril 26, 2021Reply
Link pyn lok payy pr oo byr